China 100% Scopolamine Hydrobromide dị ọcha 99% dextromethorphan hydrobromide dxm ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Shaanxi Green Bio-Injinia
100% Scopolamine Hydrobromide Dị Ọcha 99% dextromethorphan hydrobromide dxm
1.1kg / akpa, 25kg / drum, abụọ n'ígwé plastic akpa n'ime. Na eriri-drọm na akpa plastic dị n'ime. Net Net: 25kgs / Drum; Nnukwu ibu: 28kgs / Drum 3. Drum Size & Volume: 510cmX350cm, 0.08 m³ / Drum
100% Dị ọcha Scopolamine Hydrobromide 99% maka Sample n'efu
1.Name: 100% Dị Ọcha Scopolamine Hydrobromide 99% maka Sample n'efu
2.Adịdị: White crystal
4.CAS Mba. : 114-49-8
Usoro 5.Test: HPLC
6. Ebe nke sitere: Shaanxi, China (Chile)
Ọrụ kachasị nke scopolamine hydrobromide 99%
Scopolamine hydrobromide bụ nnu hydrobromide nke ngwaahịa okike anticholinergic Scopolamine, dịpụrụ adịpụ na osisi nke ezinụlọ Solanaceae. Scopolamine na-egosipụta anticholinergic Njirimara site na mgbochi asọmpi nke ndị nabatara acetylcholine muscarinic na nhọrọ maka mAChR M1. Mwepu nke mmeghachi omume nke cholinergic na-ebelata ọrụ nke usoro ụjọ ụjọ parasympathetic, na-erigbu ebe niile na ọmụmụ gbasara ọrụ parasympathetic.
Ngwa nke scopolamine hydrobromide 99%
1. Mgbochi-alkali maka gallbladder;
2. Gbochie nsị nke gland;
3. Gwọọ ọnya afọ na afọ duodenum;
4. Mee ka mkpochapụ nke afọ na eriri afọ belata, yana angina nke akụrụ na gallbladder
1kg / akpa, 25kg / drum, abụọ n'ígwé plastic akpa n'ime. Na eriri-drọm na akpa plastic dị n'ime.
Net arọ: 25kgs / Drum; Gross arọ: 28kgs / Drum
Drum Size & Volume: 510cmX350cm, 0.08 m³ / Drum
DHL Express, FEDEX na EMS maka ọnụọgụ dị ala karịa 50KG;
Mbupu mmiri maka oke ihe karịrị 500KG; na ikuku ụgbọ mmiri dị maka 50KG n'elu;
Maka ngwaahịa bara uru dị elu, biko họrọ ụgbọelu ikuku na DHL kwupụtara maka nchekwa;
Biko gosi ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịme nwechapụ mgbe ngwongwo rutere na omenaala gị tupu itinye ihenye iwu, maka ndị na-azụ ahịa si Mexico, Turkey, Italy, Romania, Russia, na mpaghara ndị ọzọ dịpụrụ adịpụ.
Shaanxi Green Bio-Engineering Co., Ltd., Emi odude ke Xi'an City nke Shaanxi n'ógbè bụ a modernized enterprise mere R & D, mmepụta na ahịa nke eke extracts, intermediates. N'otu oge ahụ, ọ nwere akụrụngwa mepụtara nke onwe yana ụlọ ọrụ R&D nke nwere njiri mara nke na-enye anyị ohere ịnye ndị ahịa anyị ihe pụrụ iche na nke kachasị mma gụnyere ahịhịa ahịhịa, nsị ero, Mkpụrụ osisi na akwukwo nri na ihe mgbakwunye eke wdg. Anyị na-enye Nwa, capsule & tablet OEM ọrụ maka ndị ahịa dị ka otu -top ngụkọta ọrụ.
Na-aga n'ihu na-agbakwunye ihe kachasị ọhụrụ, ihe kachasị iche na ndepụta ngwaahịa anyị, anyị na-edebe ndị ahịa anyị otu ụzọ n'ihu asọmpi ahụ. Nabata na-akwado anyị.
Lọ ọrụ & Lablọ nyocha
Kosher gbaara; rụọ ọrụ n'okpuru ụkpụrụ GMP;
N'ime afọ 20 'ahụmahụ na-amịpụta extracts; nnukwu ikike mmepụta;
Ihe karịrị 50 iche iche nke extracts ngụkọta ngwaahịa ọtụtụ tọn ngwongwo na nkwakọba;
100% eke, na-enweghị ihe ọ bụla sịntetik mgwa; ogo kacha elu na ọnụahịa asọmpi;
Ngwa ngwa na nnukwu ọrụ;
5-20g ihe nlele efu.
Nke gara aga: High Quality Coconut Wepụ Achịcha Ude ntụ ntụ
Osote: 100% Nature Garlic Wepụ Allicin Powder 1% CAS Mba. 533-86-6